सुनको मुल्यमा भारि गिरावट, तोलाको यति सस्तो ? - ramechhapkhabar.com
सुनको मुल्यमा भारि गिरावट, तोलाको यति सस्तो ?
नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले घटेर रु ९१ हजार ३०० कायम भएको छ। बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो।
महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९० हजार ८०० तोकिएको छ जसको मूल्य बिहीबार प्रतितोला रु ९१ हजार थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ।
चाँदी बिहीबार प्रतितोला रु एक हजार १९० मा कारोबार भएको थियो। महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीका मूल्यमा हुने उतारचडावका आधारमा यहाँ दैनिक सुनचाँदीको कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ७७३ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ।
काठमाडौं – एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको छ । हकप्रद निष्काशन भएको अवधिभित्र रितिपूर्वक आवेदन दिएका ६ हजार १८० जना सेयरधनीहरुलाई ‘हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु’ को विभिन्न दफाहरुमा गरिएको व्यवस्था अनुसार २४ लाख ०६ हजार १०६ दशमलव ४७३८ कित्ता सेयरहरु बाँडफाँड गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले गत असोज २५ गतेदेखि कार्तिक २९ गतेसम्म १० कित्ता बराबर नयाँ ३ कित्ता सेयरको अनुपातमा २४ करोड ३३ लाख ३६ हजार ३६७ रुपैयाँ बराबरको २४ लाख ३३ हजार ३६३ दशमलव ६७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो ।